မုန့်ပဲသရေစာ စားတဲ့သူတွေ ရရှိနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုး ( ၅ ) ချက် - Shwe Khit Online TV
HomeKnowledgeမုန့်ပဲသရေစာ စားတဲ့သူတွေ ရရှိနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုး ( ၅ ) ချက်
October 21, 2021 Yan Knowledge 0
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် မုန့်ပဲသရေစာတွေကို စားရင် ရနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုးလေးတွေကို ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို ကောင်းကျိုးလေးတွေကို ရမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ဖတ်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ဗိုက်တာမင် ဓာတ် ပိုရနိုင်ခြင်း
ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာချက်အရ သရေစာတွေဟာ ဗီတာမင်ဓာတ်ကို ပိုမိုရရှိနိုင်အောင် ကူညီနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ပြောထားပါတယ် ။ လူတွေ အတွက် တစ်နေ့ကို အစာ ( ၃ ) နပ် စားရင်တောင် လုံလောက်တဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်ကို မရနိုင်ဖူးလို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုထားပြီး နေ့တိုင်း သစ်သီး နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားဖို့ အကြံပေးထားပါတယ် ။ တစ်နေ့တာအတွက် ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကို လုံလောက်အောင် မစားတဲ့အခါ ရလဒ်အနေနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း နဲ့ လက်သည်းခွံ ကြွပ်ဆတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ အစားအစာ အလွန်စားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
မနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ နဲ့ ညစာ ( ၃ ) နပ် ပေါင်းတာ တောင်မှ လူတစ်ယောက် အတွက် မလုံလောက်ပါဘူးတဲ့ ။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ တစ်နေ့တာ စားတဲ့ အဓိက အစားအစာတွေ နဲ့ အတူ သရေစာကို ပေါင်းပြီး စားပေးမယ်ဆိုရင် အစား အလွန်အကျွံစားတာကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အချက်အလက်တွေ အရတော့ ဆွီဒင်နိုင်ငံ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ နဲ့ တစ်ချို့သော နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် သရေစာ စားတဲ့ အချိန်ကို သက်သက်လုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ ဦးနှောက် စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း
လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာဆိုရင် စိန်ခေါ်ရတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်တဲ့ အခါ လောင်စာအဖြစ် ဂလူးကိုစ့် ကို အသုံးပြုရပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် နည်းနေမယ်ဆိုရင်လည်း ဦးနှောက်အတွင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ချောကလက် နဲ့ သစ်ကြားသီးလို အစားအစာတွေကို ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို သိသာစွာ တိုးတက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ စိတ်ဖိစီးမှု နည်းစေခြင်း
တစ်ကယ်လို့ စိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုး ခံစားနေရပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ကော်တီဆုန်း ဒြပ်ပေါင်းတွေကို ထုတ်လွှတ်ပါတော့တယ် ။ ဒီလို ထုတ်လွှတ်ပြီဆိုရင် သွေးတွင်းက သကြားဓာတ်ကို ဆုံးရှုံးပြီး လျော့နည်းစေနိုင်တယ်လို့ အာဟာရ ပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားထားပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ သရေစာ တစ်ခုခုကို ယူစားဖို့ အကြံလေး ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ညဘက် ကောင်းစွာ အိပ်ပျော် နိုင်ခြင်း
အိပ်ယာ မဝင်ခင် အစား စားတာဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူးလို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုထားတာပါ ။ တစ်ကယ်လို့ အိပ်ခါနီး ဗိုက်ဆာလို့ စားမယ်ဆိုရင်တောင် ဗာဒံစေ့လိုမျိုး အစေ့အဆံတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ် ။ အကြောင်းကတော့ ဗာဒံစေ့ဟာ အိပ်စက်နိုင်စွမ်းကို ပိုပြီး ကောင်းစေနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကယ်လ်ဆီယမ် ဓာတ်ကြွယ်၀တဲ့ အစား အစာတွေဟာလည်း အိပ်စက်ခြင်းကို အကူအညီပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ မုန့်ပဲသရေစာတွေ ကို စားတဲ့သူတွေ ရနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုးတွေကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကျန်းမာရေး နဲ့ ညီညွတ်တဲ့ မုန့်ပဲသရေစာတွေကိုသာ စားသင့်ပြီး လိုအပ်တာထက် ပိုမစားဖို့တော့ လိုပါတယ်နော် …. shwekhitonlinetv.com